नेपाल आज | प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डलाई संघीयता घाँडो
प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डलाई संघीयता घाँडो
शनिबार, १८ जेठ २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज (ADM)
नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले नेपाल आजसंगको भेटमा भने, ‘मलाई कांग्रेस हुनुको पीडाले सताइरहेको छ । कांग्रेस हुँ भनु कांग्रेससंग विचार एजेण्डा केही छैन, होइन भनु कांग्रेस छोडेर अन्त जान पनि सक्दिन ।’
आफ्नो सम्पूर्ण जीवन नै कांग्रेसका लागि समर्पित गरेका नेता घिमिरे कांग्रेसले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएकोमा दुःखी छन् । मुलतः यी तीनवटा मुद्दा संविधानमा परेपछि मुलुक कमजोर बनेको र सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसले समेत सच्याउन नखोजेकोमा उनको चित्त दुखाइ छ ।
उनी भन्छन्, ‘संविधानमा असन्तुष्टिका विषय थुप्रै छन् । तर, मूलतः संघीयताको खारेजी, धर्मनिरपेक्षता हटाइ हिन्दू राष्ट्र स्थापना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाइ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कायम गर्नु नै बिग्रिएको राजनीतिक ट्रयाकलाई सही मार्गमा ल्याउनु हो । ’
‘कांग्रेसमा नीति र नेतृत्व केही पनि भएन । मुलुकको प्रधानमन्त्रीसहित कम्युनिष्ट पार्टी र त्यसका नेताहरु होली वाइनको नशामा छन् । विदेशी हस्तक्षेप चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । हाम्रो मौलिक कला, संस्कृति, धर्म, परम्परा भन्ने कुरा नियोजित रुपमा मासिदै छ । यसको मतियार वामपन्थी दल र कांग्रेसका नेताहरु पनि भए । संविधान जारी भएको ४ वर्ष वितिसक्यो । मुलुकमा बेथिती मात्र बढेपछि त नेताहरुको होश खुल्नुपर्ने हो नि, के भएको ?’ नेता घिमिरको आक्रोश छ ।
घिमिरे भन्छन्, ‘मलाई कम्युनिष्टमा विश्वास छैन । अब त आफनै पार्टीमा पनि विश्वास गुम्न थालिसक्यो । यो देश गणतन्त्र कसरी घोषणा भयो ? त्यहाँ स्पष्ट षड्यन्त्र छ । संविधानमा धर्मनिरपेक्षता कसरी घुस्यो ? षडयन्त्रपूर्वक सभासदहरुको आँखा छलेर घोषणा गरियो । आधा दर्जन नेताहरुले विदेशीको प्रभावमा परी ल्याएको विकृतिलाई म कसरी उपलब्धी ठानु ? ’
ओली र प्रचण्डलाई नै संघीयता घाँडो
आज केन्द्र सरकारको अवस्था हेरौं । प्रधानमन्त्रीलाई शक्ति केन्द्रीकृत गरेर बस्ने रहर जागेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कुण्ठित गर्ने विधेयक धमाधम ल्याइएका छन् । यो तानाशाही चरित्र हो । सत्तारुढ दलकै नेताहरुका एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारका काण्ड पर्दाफास भैरहेका छन् । जनमुखी कार्यक्रम के छन ?
प्रदेश सरकार हाँस न बकुल्लाको चालको अवस्थामा छ । हामीले सुरुदेखि भन्दै आएका थियौं, संघीयता यो देशलाई घाँडो हुन्छ । आज प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको मुखबाट पनि संघीयता घाँडो भयो भन्ने आशयका शब्द सुन्नमा आइरहेका छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु सबै असन्तुष्ट । श्रोत साधन केही पनि छैन । कसरी चल्छ यो व्यवस्था ?
आवश्यक परे प्रमुख राजनीतिक मुद्दामा जनमतसंग्रह गर्न पनि तयार हुनुपर्छ । मलाई थाहा छ, मुलुकमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र गणतन्त्रका पक्षमा लाग्ने शक्ति पनि ठूलो छ । तर, त्यो भन्दा पनि ठूलो शक्ति यी मुद्दाको विपक्षमा छ । यो विषयको टुंगो लगाउन जनमतसंग्रहमा जान सकिन्छ । मुलुकका प्रमुख कुनै पनि राजनीतिक मुद्दामा जनमतसंग्रह गरेर टुंगो लगाउने हो भने सबै विवादको हल हुन्छ । तर, यहाँ यसो गरिदैन ।
ख्वै संविधान जारी गर्नेबेला देशभरबाट संकलन गरिएका सुझावका पेटी कहाँ थन्क्याइएको छ ? जनताको सुझाव लिने तर त्यस अनुसार काम नगर्नु भनेको जनताको अपमान होइन ? यही हो लोकतन्त्र ?
राजसंस्था र गणतन्त्रका विषयमा समेत जनमतसंग्रह गर्न दलहरु तयार हुनुपर्छ । ढाँट, छल र विदेशी प्रभावको राजनीति टिकाउ हुँदैन ।
कांग्रेस पदाधिकारीको राजीनामा
नेता घिमिरे भन्छन्, ‘सबैभन्दा बुद्धिमानी के हुन्छ भने कांग्रेसमा सभापतिसहित सबै पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्छ । पार्टीलाई बलियो बनाउने र मुलुकलाई पनि सही मार्गमा लैजाने हो भने यो नै एउटा उपाय हो । ’
अहिले जागरण अभियानको नाटक चलिरहेको छ । हुन त म पनि यो अभियानमा लागेको छु । भर्खरै आफनो गृहजिल्ला र केही छिमेकी जिल्लामा अभियान सकेर फर्केको छु । तर म दावीका साथ भन्छु यो अभियान नेतृत्वले १४औं महाधिवेशन पर सार्न रचेको खेल मात्र हो, अरु केही होइन ।
अब सबै पदाधिकारीले राजीनामा गरेर सिधा महाधिवेशनमा जानुपर्छ । महाधिवेशनमार्फत नयाँ विचार र क्षमता भएका नेताहरु नेतृत्वमा आउने मेरो विश्वास छ । यसले पार्टीलाई उर्जा दिन्छ, मुलुकलाई बलियो बनाउन भूमिका पनि खेल्न सकिन्छ । अहिलेका नेताहरुबाट केही लछारपाटो लाग्नेवाला छैन ।
यसकारण पदक वहिष्कार
सरकारले राष्ट्रपतिद्वारा वितरण गरिने पदक पाउनेहरुको सूचीमा मेरो नाम पनि रहेछ । म पहिलो संविधानसभाको सभासद । कांग्रेसको प्रमुख सचेतक थिएँ त्यो बेला ।
मलाई गृहमन्त्रालयबाट खबर आयो । घरमै पत्र आयो । यसो हेरेको त रगत नै तातेर आयो । संविधानका विभिन्न प्रावधानमा मेरो असहमति छ । संविधानमा भएका कतिपय व्यवस्थाले मुलुक नै खतरामा पर्न थालिसक्यो । यस्तो बेला कसलाई के को पदक ?
प्रधानमन्त्रीले के गर्न खोजेको हो ? यत्रो चार वर्ष उनी के हेरेर बसे र अहिले पदक दिनुपर्ने भयो ? ११०९ जनालाई पदक वितरण गरियो रे । यसमा दुई करोड भन्दा बढी खर्च भएको छ । यस्तो फजुल खर्च गर्ने ? यो भन्दा कुनै दुर्गम जिल्लाको विद्यालयमा सहयोग गरेको भए कम्तिमा ग्रामीण क्षेत्रका बालवालिकाको भलो त हुन्थ्यो ।
यस्तो वाहियात कुरामा मेरो स्वीकृति हुन सक्दैन थियो । यसमा राष्ट्रपतिज्यूको दोष छैन । मैले उहाँको अपमान गर्न खोजेको होइन, तर प्रधानमन्त्री ओलीको यो सरासर गलत काम हो ।